शिखर इन्स्योरेन्सले डाक्यो एकैपटक २ आ.व.को वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ? Bizshala -
शिखर इन्स्योरेन्सले डाक्यो एकैपटक २ आ.व.को वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १५ औँ तथा १६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को वार्षिक साधारणसभा एकैपटक डोकेको हो। सभा आउँदो चैत ९ गते सोमबार कम्पनीको काठमाण्डौ थापाथलीस्थित शिखर विज सेन्टरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ।
Shikhar Insurance Company limited AGM